Qasabadaha Tilmaamaha-Jikada Qasabadaha, Qasadaha Buuxi Weelka, Qasabada Musqusha | WOWOW
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada(Bogga 5)
Waa maxay qasabada jikada ugu caansan?
2020 / 10 / 03 12276
Markaan fiiro gaar ah siineyno naqshadeynta goobta lagu noolaado, tubbada musqusha ma ahan mid dhexdhexaad u ah biyaha, laakiin waa taabashada ugu badan ee naqshada musqusha. Hadda waxay h ...
Sida Loo Xulo Qalabyada Maydhashada Cusub
2020 / 10 / 02 12325
Qalab wanaagsan iyo qasabado? Ugu horreyntii, waa inay ka bilaabataa maaddada. Hadda waxyaabaha guud waxay badanaa isticmaalaan 59 naxaas ah. Si fudud u fahmi inay tahay daawaha naxaasta ah oo leh naxaas ka kooban ...
Qalabka Dabaqa Musqusha Heer Caan Ah
2020 / 10 / 02 16346
Rakibida musqusha, qof walba wuxuu diirada saari karaa alaabada fayadhowrka waaweyn, sida barkadaha qubeyska iyo musqulaha. Xaqiiqdii, rakibidda qalabka qalabka sidoo kale waa mid aad muhiim u ah. Haddii rakibidda ...
Hagaha Rakibaadda Musqusha Musqusha
2020 / 10 / 02 17287
Maalin shaqo ka dib, mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee daalka nooga yareeya ayaa ah inaad qubeysato. Xulashada iyo rakibidda madaxyada qubeyska musqusha ayaa sidoo kale u baahan fiiro gaar ah. Waxay si toos ah ula xiriirtaa ...
Waa Maxay Isbedelka Socda Ee Dhamaadka Qasabada?
2020 / 09 / 30 16155
Liisteena ugu weyn ee u janjeera qasabadaha 2020 waa halkaan! Mid ka mid ah waxyaalaha badan ee laga fekerayo marka la dooranayo jikada ama qasabadda musqusha, bilicsanaanta ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ....
Farsamaynta Deganaanshaha: Habab fudud oo kor loogu qaado bakhaarka jikada - Salisbury Submit
2020 / 09 / 29 12097
Shakhsiyaadka waxay waqti dheeri ah ku qaadanayeen guriga sannadka 2020 marka loo eego sannadihii ka horreeyay, iyo in la hubo in howlaha ku hareeraysan guriga ay isu beddeleen mudnaan. Hal fikrad dejinta degenaanshaha oo adeegaysa ...
Qiimaha Dib-u-hagaajinta Jikada ee tixgelinta la siinayo
2020 / 09 / 26 12777
Waxaad qorsheyneysay dayactir daran oo jikada ah, oo ay weheliso qalabka guryaha cusub, tuubooyin, miisaska sare ama armaajo. Meesheeda, suurtogalnimada ayaa ah inaad ujeeddadeedu tahay inaad ku xoojiso guriga ...
Toosinta Ugu Weyn ee Dejinta Madaxyada Maydhashada
2020 / 09 / 21 13279
Toosinta Ugu Weyn ee Loo Sameeyo Madaxyada Maydhashada Qofna kuma habboona inuu raadsado inuu wax ka qabto madaxa qubayska shitty, mid fudud oo fudud. Si kastaba ha noqotee munaasabadda aad ku nooshahay guri kiro ah, waxaad pani ...
Ikhtiyaarrada ugu Fiican Fududeynta Jikada ee Milkiilayaasha Guryaha
2020 / 09 / 18 13896
Xulashooyinka Fudud ee jikada ee ugu weyn taabashada Sawirka: unsplash.com Inteena ugu badan waxaan leenahay qasabado caadi ah jikadaheena, meesha aan u isticmaalno gacmaheena inaan ku muujino ...
Ma u Baahan Tahay Aerator on Tuunbo?
2020 / 09 / 17 20454
Dad badan ayaa aad u xiiseynaya, maxaa biyaha uga haray xumbada tuubada? Taasi waa sababta oo ah "Aerator" ayaa lagu rakibay gudaha, taas oo ka dhigi karta biyaha inay si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacaan, yareeyaan saameynta wat ...
Sida Loogu Xidho Mashiinka Dhaqida Qasabada
2020 / 09 / 17 27848
Qasabada mashiinka dharka lagu dhaqo waa qayb aad muhiim ugu ah mashiinka dharka lagu dhaqo. Dad badan ayaa ku wareejiya waxyaabo fara badan qasabada mashiinka dharka lagu dhaqo, gaar ahaan mashiinka dharka dhaqda. ...
Tilmaamaha Iibsiga Qasabada
2020 / 09 / 16 19805
Mararka qaar, si loo xusho qasabad qurux badan oo qurux badan, dadku waxay ku wareegaan dukaan qalabka guryaha u dhow, laakiin weli ma heli karaan mid ku habboon. Markii hore, Ma aanan aqoonin sida loo doorto qasabad. Kadib stu ...